रेखाजी कुर्ता,साडी र लोग्ने बदले जस्तै पार्टी बदलेको पटक्कै सुुहाएन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मलाइ त अचम्म लाग्छ हैन नेपालका राजनीतिकर्मी र कलाकर्मीको भर किन पटक्कै नभएको । धोती,साडी र लोग्ने बदले जस्तै पार्टी बदलेको बदल्यै गर्छन । बदल्नु अनि केही दिन चर्चामा आउनु सबैको ध्यान आफु तिर तान्नु ठुलो कुरो हो । तर चर्चा र नामकै लागि राजनीतिमा लागेका कलाकारले के गर्न फिल्म बनाउने, कि चटक देखाउने ? हुनत नेपालका कुनचाहिँ राजनीतिक दल अनि नेताहरुले चटक नदेखाएका हुन र ?
रेखा थापा राप्रपामा प्रवेश गरेसँगै चर्चा परिचर्चा सुुरु भएको छ । कतिपयले त (हिजो एक समय थियो जत्तिबेला माओवादी (जनयुद्ध वा क्रान्ति)को नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए,त्यतीबेला रेखालाई माओवादी मन पथ्र्याे त्यसपछि शान्ति वार्ता भयो त्यतीबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए, रेखाको माओवादीसँग माया बस्यो तर जब तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा गए अनि त्यसपछि छविलाल दाहाल भए,हेर्नुहोस् आज के भयो ?
तपाई हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कसैको नामसँग छवि जोडिएर आयो भने नायिका रेखा थापा देख्न सम्म सक्दिनन त्यसैले त हिजो छवि ओझालाई छोडिन आज छविलाल दाहाल भनेर सामाजिक संञ्जालमा पोस्टाएका छन् । साच्चैनै भन्नुपर्दा राजनिती खेलाडीहरूले खेलखेल्ने थलो भएको छ ।
केही वर्षअघि नायिका रेखा थापा माओवादी प्रवेश गरिन । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डको हातबाट टिका मात्रै लगाइनन् । उनले त नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कम्मर मर्काइ मर्काइ कुम जोडिजोडी नाचकी पनि थिइन । सोही क्रममा उनले क्रान्तिकारी लालसलाम गरेर हात हल्लाएकी थिइन ।
हो उनै नायिका रेखा थापा भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिन् । पार्र्टी प्रवेश सँगै उनले म हिन्दुनारी तपाईहरुको साथ पाए प्रधामन्त्रीसम्म बन्न सक्छु भनेर भनेकि छिन् । हुन त राजनीति गर्न कसैलाई प्रतिबन्ध लगाइको छैन । अनि कतिपय कलाकारले पनि नेताहरुले भन्दा राम्रो काम गरेर उदाहरणिय बन्न सफल भएका छन् ।
हुन त यो बिषय उनको नितान्त ब्यक्तिगत र हो । किनकि उदेश्य र स्वार्थले मानिस नजिक र टाढा हुन्छन । हो जे जस्तो भएपनि वर्तमान परिस्थितिमा सोचबिचार बिना नैै राजनीतिक पदको लोभ लालचमा परेर पार्टीमा हाम्फाल्ने गरेका छन् । बिना सोच बिचार र उदेश्य बिना राजनीतिमा प्रवेशगरेकै कारण देश धरापमा परेको छ । जता मन लाग्यो उतै हाम फालेर देशको बिकास कसरी हुन्छ ?
यसले त केवल ब्यतिगत स्वार्थ मात्र पुर्ति हुने गरेको छ ।जोस जागर र सोचले काम गर्ने हो भने जहाँ जसरी बसेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ । मिनिसकटमा नाँचेर पब्लिसिटी कमाएकी रेखाले अब नेपालको राजनितीमा कतिको सफलता हात पार्लिन वा छलाङ्ग मार्लिन । त्यो भने आँउदा दिनहरुमा देखिएला । तर वास्तवमै भन्नुुपर्दा कुर्ता,साडी र लोग्ने बदले जस्तै पार्टी बदलेको भने उनलाई पटक्कै सुुहाएको छैन ।